नेपालको भारत (र चीन) प्रति कस्तो नीति हुनु पर्छ ? • WhyNepal.com
February 22, 2016 nepali, politics, thought provoking, tipsUjwal
नेपालको लागि २१ वौँ शताव्दी सापेक्ष परराष्ट्र नीति, “उत्तर दक्षिण नीति”
सन् २०५० सम्ममा संमृद्धिका हिसाबले नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारत क्रमश: पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालको अहिलेको गति, भताभुंग नीति र नेतृत्वमा छिमेक प्रति देखिएको अन्योलपन हेर्दा नेपालको सामू एकातिर अाफ्नो अस्तित्व नै रक्षा गर्नुको चुनौती छ भने अर्कोतिर दुबैको अपार सम्पन्नताको लाभ पाउने अपार अवसर छ।
शान्ति र संमृद्धि हासिल गर्नको लागि नेपालले दुई विशाल छिमेकीहरुसँग निरन्तर र क्रमिक विकासमा आफूलाई समाहित गर्दै सम्बन्धको अन्तरनिर्भरतालाई पहिचान गर्नु पर्दछ र सावधानीपूर्वक सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रयासरत हुनुपर्छ । सो को लागि हामीले २१ औँ शताव्दी सापेक्ष परराष्ट्र नीति- “उत्तर-दक्षिण नीति” प्रस्ताव गरेका छौँ।
उत्तर-दक्षिण नीति अनुरुप संसारका दुई विशाल अर्थतन्त्र, चीन र भारत बीचमा रहेको नेपालले अाफ्नो रणनीतिक भूमि सदुपयोग गर्न आफूलाई विश्वको केन्द्रबिन्दु रहेको छाप स्थापना गर्नु पर्छ। किनकि सन् २०५० सम्ममा संसारको आकर्षणको केन्द्रविन्दु नै यसै अति संमृद्ध क्षेत्रमा सर्नेछ र नेपाल यसै क्षेत्रको बीचमा रहेको छ। ‘नेपाल – विश्वको केन्द्रविन्दु हो’ भन्ने छाप बसाउन नेपालले आफ्ना कुटनीतिक माध्यमद्वारा प्रर्वद्धन गर्नेछ । पर्यटक, अागन्तुक र अाफ्नै विद्यार्थीहरुद्वारा यसको प्रवर्द्धन संसार भरि गर्नेछ। साथै, सूक्ष्म कुटनीतिद्वारा चिनियाँ तथा भारतीयहरु माझ पनि हाम्रो साझा क्षेत्र विश्वको केन्द्रविन्दु हो भन्ने छाप फैल्याउने काम गरिनेछ । नेपाली नागरिकहरुको मानसिकतामा यो सोच प्रेरित गर्न नेतृत्वबाट निरन्तर व्याख्या गर्ने र शिक्षा, साहित्य तथा संचारको निरन्तर प्रयोगबाट यसैलाई स्थापित गर्ने काम गरिनेछ ।
२. अन्तर-निर्भर अर्थतन्त्र (नेपाल-भारत-चीन बीच):
उत्तर-दक्षिण नीति अनुरुप नेपालले भारत र चीनबीच एक पुलको काम गर्नेछ। यी दुई प्रतिस्पर्धी महाशक्ति विकासोन्मुख रहिरहन सहकार्य आवश्यक रहेकोले नेपालले यी दुई बीचको सुरक्षित क्षेत्रको सुनिश्चितता गर्दछ। नेपालले दुई छिमेकीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार सुनिश्चित गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। नेपाल, भारतीय र चिनियाँ उद्दमका बीच खुला व्यापार क्षेत्र बन्नेछ। ‘उत्तर-दक्षिण मध्यस्थता अदालत’ले अन्तर देशीय व्यापारिक समस्याको छिटो समाधान गर्ने काम गर्नेछ। नेपाल, भारत र चीनको उदार छिमेकी बन्नेछ र चिनियाँ तथा भारतीय नागरिकहरुलाई नेपालमै व्यवसाय संचालन गर्न विशेष सुविधा दिनेछ।
नेपालले अाफ्नै देशमा मात्र पाइने जडिबुटी, खनिज तथा बालीको माध्यमबाट भारत तथा चीनका कृषि मागलाई परिपूर्ति गर्नेछ। यसबाट भारत र चीनलाई रणनीतिक तवरले नेपालप्रति पनि निर्भर बनाउने काम गर्नेछ। नेपाल, भारत र चीनको बराबर साझेदारीमा उत्तर-दक्षिण बैंक स्थापना हुनेछ जसले जलस्रोत, स्वच्छ उर्जा तथा खरबौँ लगानी लाग्ने विशाल पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरी नेपालको माध्यमबाट भारत र चीनको संमृद्धि हासिल गर्नेछ। उदाहरणको लागि चीन तथा भारतलाई जोड्न ५ उत्तर- दक्षिण नाकामा द्रुत मार्ग र विद्युतीय रेल मार्गमा ध्यान दिइनेछ। सार्कका अन्य मुलुकहरु र नेपाल बीच बाटो-घाटोमा मुलभूत रुपमै सुधार ल्याउनेछ। पारम्परिक उर्जाको स्रोत लाई छाडेर स्वच्छ उर्जाको स्रोतमा आधारित रहि देशका महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणतिर अगाडि बढ्नेछ।
उत्तर-दक्षिण नीति अनुरुप नेपाल, भारत र चीनबीच प्रभावकारी मध्यवर्ती राज्य (buffer state) बन्ने छ। नेपालले भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार गर्न मध्यस्थकर्ता र संवादकर्ताको भूमिका खेल्नेछ। भारत र चीनबीच कुनै विवाद आइपरेमा नेपालले एक ‘उत्तर-दक्षिण सम्वाद केन्द्र’ को माध्यम बाट तटस्थ तवरले दुई महाशक्ति बीच निरन्तर संवादको वातावरण निर्माण गरि नै रहनेछ। नेपाल करिब १ अरब हिन्दू तथा आधा अरब बौद्धमार्गीहरुको लागि आध्यात्मिक आस्थाको केन्द्रको रुपमा विकासित हुँदै जानेछ । यसले ‘समानुभुतिद्वारा मानवता” भन्ने अास्थाको नीति अपनाउनेछ। अाफ्ना मूल्य मान्यता प्रवाह गर्न नेपालभरि आध्यात्मिक केन्द्रहरु निर्माण गरी तिनलाई भारतीय तथा चिनियाँ आध्यात्मिक केन्द्रहरुसंग सहकार्य गराउनेछ।
उत्तर-दक्षिण नीति अनुरुप नेपालले भारत र चीनसंग यस्तो समन्वयात्मक सम्बन्ध राख्दछ जसले भारत र चीनको समतामूलक संमृद्धिमा बाधा पुर्याउने छैन। आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपालले अाफ्नो पश्चिम, केन्द्र तथा पूर्वमा प्रकोप सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नेछ जसमा एक वर्षसम्म धान्न सकिने खाद्यान्न, औषधि, उर्जा उपकरण, सवारी साधन, उद्दार उपकरण जस्ता अत्यावश्यकीय सामग्रीहरु पूर्ण रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधियुक्त भवनमा भण्डारण गरिनेछ। यो केन्द्रले चीनको दक्षिणी तिब्बत, नेपाल तथा भारतका उत्तर-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी राज्यहरुमा आउने कुनै पनि प्रकोपमा तुरुन्त मद्दत गर्नेछ।
भारत र चीन दुबैसंग विना रोकटोक व्यापार र आवत-जावतको लागि नेपालको खुला तर नियन्त्रित सिमाना हुनेछ। पारस्परिक समझदारीमा आधारित कुशल पहिचान प्रविधि र प्रणालीको विकासले विना हैरानी नेपाली, चिनियाँ तथा भारतीय नागरिक तथा सवारी साधनको आवत जावत सुनिश्चित गर्नेछ। भारत र चीनको आन्तरिक सुरक्षालाई सहयोग पुर्याउने गरी नेपालले यी छिमेकसंग सम्बन्धित सुरक्षा जानकारी पारदर्शी र सामयिक रुपमा अादनप्रदान गर्नेछ। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारत या चीनमा आतंककारी गतिविधि गर्ने जो सुकैलाई पनि नेपालले शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्नेछ। आतंककारी गतिविधि तथा सुपुर्दुगीको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपालले फास्ट ट्रयाक अदालतहरू गठन गर्नेछ। आफ्ना छिमेकीहरुसंग मिली नेपालले आतंकवाद विरुद्ध संयुक्त कार्यदल परिचालन गर्नेछ।
विश्वमा नेपालले ‘शान्ति दूतहरुको माध्यमबाट शान्ति स्थापना’ को नीति अवलम्बन गर्नेछ। सन् २०३० सम्ममा नेपालले आफ्ना अधिकतम शैन्य बललाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनार्थ प्रयोग गर्नेछ। नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्रोत, पानीको प्रयोग सीमापारिका नागरिकहरुलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी आफ्नो नागरिकहरुको हितलाई प्रयोग गर्नेछ। आफ्ना छिमेकीहरुको सुरक्षालाई पनि मध्य नजर गरी नेपालले आफ्नो पानीको सदुपयोग गर्नेछ।
उत्तर-दक्षिण नीति अनुरुप नेपालले आफ्नो छिमेकीहरुमा प्रभाव जमाउन ‘मानवतालाई एकै सूत्रमा बाँध्न समानुभुती’ को नीति अवलम्बन गरी अाफु अध्यात्मको केन्द्रबिन्दु बन्नेछ। नेपालले ‘उत्तर दक्षिण केन्द्र’ नामक वृहत् स्रोत तथा संवाद केन्द्र संचालन गर्नेछ, जसले नेपाली, चिनियाँ तथा भारतीय सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक नेतृत्वलाई एक अर्कालाई बुझ्ने र संगै काम गर्ने अवसर दिलाई जीत – जीतको वातावरण सिर्जना गर्नेछ। नेपालले चिनियाँ तथा भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न ‘अतिथि देवो भव:’ को भावनाले प्रेरित आध्यात्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्नेछ। जस अनुरुप नेपालमा पर्याप्त संस्कृति र अध्यात्म बुझाउने केन्द्रहरुको स्थापना गरी चिनियाँ र भारतीय नागरिकको तन-मन र ध्यानलाई नेपालप्रति आकर्षित गर्नेछ। तीनै देशमा रहेका विशिष्ट संस्कृति तथा उप-संस्कृतिको संयोजनमा आधारित अध्ययन गर्न नेपालमा सुविधायुक्त उत्तर-दक्षिण विश्वविद्यालय बन्नेछ जसको शाखा चीन र भारतमा पनि रहनेछ। छिमेकका संस्कृति तथा संस्कारको भित्री बुझाइ लिन पाठशालाहरुमा म्यान्डरिन, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा पनि सिकाइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
मुल कुरो नेतृत्व वर्गले राजनीतिको नैतिक प्रयोग गरे मात्र मुलुकको कुनै पनि नीति सहि व्यवहारमा उत्रनेछ। अबको चार दशक सम्म सबै राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र तथा योजनाविद्हरु यस्तै संमृद्धि तिर धकेल्ने ‘एकल द्वार’ नीतिबाट चले सन २०५० सम्ममा संमृद्ध नेपाल अवश्य भोग्न पाइन्छ। नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन अब उचित मार्गदर्शन चाहिएको हुनाले हामीले ‘उत्तर-दक्षिण’ नीतिको खाका सिफारिस गदर्छौँ। नेपाली प्रधानमन्त्री अहिले भारत नाकाबन्दी पश्चात भारत सँग सम्बन्ध सुधार गर्न जान लागेको बेला यस प्रकारको दुरगामीले नीतिले उहाँलाई सहि मार्गदिशा दिन्छ कि ?
यो लेख विवेकशील नेपाली दलले सिफारिस गरेको परराष्ट्र नीति बाट उदृत गर्दै लेखेको हुँ र यस नीतिको संयोजक पनि थिएँ।
← Letter to my Indian friend “भोको रहनु । मुर्ख रहनु” – एप्पल कम्प्युटरस् का संस्थापक स्टिभ जब्सका सन्देश →